EU oo canbaareysay Somaliland - BBC Somali
EU oo canbaareysay Somaliland
Madaxda Hawlgalka Midowga Yurub iyo dalalka Xubnaha ka ah waxa ay si aad ah u canbaareeyeen masuuliyiinta Somaliland ee fuliyay dilka lix qof oo maxaabiis ahaa oo ku jiray xabsiga aadka loo adkeeyay ammaankiisa ee Mandera.
Waxa ay sidoo kale sheegeen in ay tahay ficil aan la aqbali karin, iyaga oo intaa ku daray in dib uu u dhigayo hannaanka heerka sharci ee Somaliland.
Howlgalka madaxa Midowga Yurub, ayaa si xoog ah ugu cad in ay ka soo horjeedaan daldalaada ayna u texgeliyaan in ay kaga dhigan tahay xad gudub halis ku ah xuquuqda aasaasiga ah iyo sharafta qofka bani’aadamka ah.
Madaxda Hawlgalka Midowga Yurub wuxuu sheegay inuu aad uga xun yahay dib u dhacan weyn kaddib sagaal sano markii la joojiyay in dadka xukun dil ah lagu fuliyo, waxaana ay ku booriyeen masuuliyiinta Somaliland inay dib uga fakiraan go’aankeeda ay uga leexanayso jidka horumarka ee ay hadda hayaan.
Madaxda Hawlgalka Midowga Yurub waxa ay ugu yeereen masuuliyiinta Somaliland inay si dhakhso u joojiyaan xukunnada dilka oo ay ugu horayso inay qaataan shuruuc ku haboon joojinta xukunka dilka. Midowga Yurub waxay rajaynayaan inay masuuliyiinta Somaliland kala shaqeeyaan arrintani.
Sida laga warqabo masuuliyiinta Somaliland ayaa dilal toogasho ah ku fuliyeen Isniintii lix nin oo laba ka mid ahaa askar ahaayeen, kaddib markii hore maxkamada Somaliland ee kala sareeyaa ugu xukumeen dilal toogasho ah , iyadoo gacan ku-dhiigle kastaa qof hore u dilay.